सिमकोटको दोचादोफर गुठी र गोर्खालीको प्रसङ्ग « Rara Pati
सिमकोटको दोचादोफर गुठी र गोर्खालीको प्रसङ्ग
सिमकोट हुम्लाको केन्द्र मात्रै नभएर नेपालको उच्च स्थानमा रहेको सदरमुकाम पनि हो । यसको पौराणिक सन्दर्भ बोन धर्मसँग र ऐतिहासिक प्रसङ्ग खस मारुल्ले राजासँग गाँसिएको छ । यो कर्नाली प्रदेशको उत्तरी प्रदेशद्वार हो । मारुल्लेकोट ऐतिहासिक र सामरिक स्थल हो । यो ठाउँ सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्राकृतिक सङ्गमलाई परिचालन गर्ने प्रशासनिक केन्द्र पनि हो ।
यहाँको लोककथन अनुसार सिमकोटको पश्चिममा भग्नावशेषको रूपमा रहेको मारुल्लेकोट खस मारुल्ले राजाहरूको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र र शीतकालीन दरबार हो भनिन्छ । यहाँ नौतले दरबार थियो रे तर ग्रीष्मकालीन राजधानी हुम्लाको उत्तरीद्वारको अन्तिम विन्दु ह्याँरी हाल अपभ्रंश भएर यारीगाउँ भएको छ । यारीको भन्ज्याङ्गको काखमा अवस्थित यारीमा ताक्लाखारको व्यापारमा जानेहरूबाट जमात उठाउने, शिकार खेल्ने, सीमाको रेखदेख गर्ने, बन्द व्यापारलाई नाइकोराबाट सुरक्षा गर्ने कार्य प्रमुख थिए । यो स्थान व्यापारी कर उठाउने मार्ग भएकोले यहाँको भन्सार प्रतिनिधिको रूपमा पुत्ला राखिन्थ्यो । पछि धर्मभकारीको नाममा जुम्ला राज्यबाट वार्षिक ठेक्का प्रणालीमा दिने गरियो । जो जसले पनि बोलकबोलको बढाबढमा ठेक्कामा लिने चलन थियो । कवोल गरेको रकम राज्यलाई बुझाएर बाँकी रकम ठेक्का कबोल गर्नेले नै लिन चलन पाइन्छ ।
यारीमा ताक्लाखारको व्यापारमा जानेहरूबाट जमात उठाउने, शिकार खेल्ने, सीमाको रेखदेख गर्ने, बन्द व्यापारलाई नाइकोराबाट सुरक्षा गर्ने कार्य प्रमुख थिए । यो स्थान व्यापारी कर उठाउने मार्ग भएकोले यहाँको भन्सार प्रतिनिधिको रूपमा पुत्ला राखिन्थ्यो । पछि धर्मभकारीको नाममा जुम्ला राज्यबाट वार्षिक ठेक्का प्रणालीमा दिने गरियो ।
यो स्थान प्राचिन कालदेखि अर्वाचिनसम्म शक्ति र प्रशासनिक मुख्यालय र मुख्यालयको कुनै न कुनै भागको रूपमा रहेको तथ्य पाइन्छ । अशोक चल्लको नेपाली भाषाको शुद्ध लेखोट वि.सं. १३१२ को ताम्रापत्र, वि.सं. १९०३ को दोचादोफर गुठीको स्थापना, वि.सं. १९६९ मा स्थापित कर्णालीको उत्तरी क्षेत्र हेर्ने न्यायालय रहेको स्थान आदिको स्थापनाले यस ठाउँको महत्व र ऐतिहासिकतालाई दर्शाउँछ ।
स्थायी र शीतलकालीन केन्द्र सिमकोटको मारुल्लेकोट भएकोले यहाँको बस्ती घना व्यवस्थित थियो । जहाँ ओरा, भोरो, खाँदी, खुड्को, धराल, पछाल, रावल, बुढाथोकी, रोकाया, दमाई, कामी र सुनार आदिको व्यवस्थित बस्ती भएको कुरा हाल प्राप्त पुरात्तात्विक सामग्री, स्थाननाम, घरका खण्डहरहरूका भग्नावशेष र लोककथनहरूले पृष्टि गरेका छन् । अझ मालपोत कार्यालय र मुखियाहरूका घर घरमा रहेका पुराना कागजातहरूको प्रमाणले पनि प्रस्ट पार्छ ।
नागराज, अशोक चल्ल, पुण्य मल्ल, पृथ्वी मल्ल, बलीराज शाही, फ्याउराज शाही, सोभान शाही र मलय वर्माहरूको केही न केही रगत, पसिना र श्रमले सिमकोटलाई रङ्गाएको छ । यो एक सामरिक, व्यापारिक र धार्मिक स्थल सिमकोट वि.सं. १८४६ सम्म सभ्यताको बलियो धरोहर थियो ।
सिमकोट एक विचित्रको ऐतिहासिक ठाउँ भए पनि हाल यसका धेरै स्थानहरू खण्डहरमा परिणत भएका छन् । जसमध्ये मारुल्लेकोट पनि एक हो । जसको मुहारमा ठूल्ठूला झार, जङ्घल उम्रेर विरूप भएको छ । यसको पूर्वतिर ठूल्ठूला दश गाउँ थिए । त्यहाँका स्थानीय जानमानहरूमा डुकछिमेल, गाङछिमेल, छिकछिमेल, नाङछिमेल र काङछिमेलले गाउँ समाजलाई सुव्यस्थित गरेका थिए । जसको साक्षी सिमकोट पाँबाडा गाउँको मुङग्राधाराको कलात्मक रूप हो । त्यो नै ऐतिहासिक गौरव गाथाको प्रशस्ती र परिचयको सम्वाहक हो । जहाँ नागराज, अशोक चल्ल, पुण्य मल्ल, पृथ्वी मल्ल, बलीराज शाही, फ्याउराज शाही, सोभान शाही र मलय वर्माहरूको केही न केही रगत, पसिना र श्रमले सिमकोटलाई रङ्गाएको छ । यो एक सामरिक, व्यापारिक र धार्मिक स्थल सिमकोट वि.सं. १८४६ सम्म सभ्यताको बलियो धरोहर थियो । तर पछि राजनीति पूर्वाग्रहले ध्वस्त भयो र पारियो ।
२३१ वर्षअघि गोर्खा साम्राज्यवादले बलात्कार गरेको आलो घाउ गोर्खाली शब्द हो । यो शब्दले पनि अहिले कर्नालीलाई च्यापेको छ । तर पनि हामी नेपालीलाई विशाल नेपाल चाहिएको छ । तर भौगोलिक एकीकरणले मात्र अब पुग्दैन । यसका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा सम्मिलन हुने नेपाल चाहिएको छ । समावेशी नेपाल चाहिएको छ । संघीय नेपाल चाहिएको छ । समतामुलक समाजको आधार तय गर्ने नेपाल चाहिएको छ । तब मात्र अन्तर्राष्ट्रिय दबाव दिन सक्छौ । कर्नाली क्षेत्रमा गोर्खाली शब्द भन्दा र सुन्दा पनि त्रसित हुन्छन्, दुःख दिन आएका हुन् भन्ने भावमा बुझिन्छ । सिमकोटको वर्तमान अवस्था बेहालको छ । पञ्चायत कालमा मारुल्लेकोटलाई रानीवन भनिन्थ्यो तर आजभोली आर्मीको जिल्ला क्वाटर भएको छ । यहाँको जङ्गल पातलिँदै नाङ्गो हुन थालको छ । यहाँको माटो कुरुपिन थालेको छ ।
वर्तमानमा सुरक्षित र संरक्षित राख्नुपर्ने ठाउँहरूमा कुकीलकोट, धरलाघर, टुङमा, रिगाडे, ठुने, भदाले, सेरा, चुलिझाड र पीपलनाउला आदि छन् । यी ठाउँहरूमा अहिले पनि खनजोत गर्दा पुरना गरगहना, भाँडाकुँडा, हातहतियार, सिक्का र धातुहरू पनि सहज रूपमा भेट्टाइन्छ । त्यो मारुल्लेकोटको स्वरूप आज पनि राम्रोसँग देखिन्छ । राजा बस्ने कोटलाई मारुल्लेकोट, दासदासी बस्ने कुमारेकोट र भाइदार बस्ने लामादग्डा, धरलाघर, टुङमा आदि थिए । यहाँ जातिय उत्थान र पतनको सघङ्र्षले यहाँको यो गौरवको निधि धराशायी भएको देखिन्छ । कुनै बेला सम्मानीत भएको मारुल्ले शब्द आजभोली रीस, राग, द्वेय, इष्र्या र कलहको पर्याय रूपमा अर्थ लगाइन्छ ।
यहाँ दशौं शताब्दीमा बोन धर्मको हिल्छो देवतामाथि पूर्व वैदिक धार्मिक देवता मष्टोले गरेको कपटपूर्ण छलको रहर र कहरलाग्दो सिलोक र गाथाहरू धेरै धेरै छन् । सिमकोटमाथि दशौं शताब्दीतिर पहिलो झड्का, कल्यालको प्रवेशले पन्ध्रौ शताब्दीमा दोस्रो झड्का, अठारौ शताब्दीतिर गोर्खालीको आक्रमणले तेस्रो झड्का र वि.सं. २०४६ देखि हालसम्म चौथो झड्का लागेको आँकलन गर्न सकिन्छ । यसले यहाँको सांस्कृतिक र सामाजिक विलय, प्रलय र आलय भएको पाइन्छ । त्यसपछि जङ्खवहादुरको उदय, पञ्चायत कालको सुरुवात, वि.सं. २०२१ भूमिसुधार, गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, २०३६ को जनमत सङ्ग्रह, २०४६ को जन–आन्दोलनबाट सर्वाधिक प्रभावित भए पनि आँसे र गाँसेको सामन्ती व्यवहार अझै हावी भएको छ । नेतापछि लाग्यो सोझा निमुखालाई कुटपीट गर्यो । सार्वजनिक योजनाको ठेकदार बन्यो । रकम कुम्ल्यायो । अध्यक्ष ठेकदार, सचिव पसले, शिक्षक होटले र सर्वत्र वेरोजगारको झोले बन्यो । तहअनुसारको बक्सौनी चढायो । काम नगरे पनि काम पुरा जाँचपास र मूल्याङ्कन गर्यो गरायो । यहाँको चलन यस्तै हो भन्दै राजनीतिको खेतीमा युवाहरूलाई बराल्यो । बस कसले सोच्ने ? त्यो सक्रिय जनशक्तिको सदुपयोगतिर ध्यान, न्यान र छ्यान !
यहाँका धाराहरू बौलाएका छन् । रुखहरू रक्सी पिउँछन् । खाद्यान्न मालपानीको सौगात हुन्छ । फगत् दत्तात्रेय चौतारी ठिङ्ग उभिएको छ । जग्गा बेच्यो । भाग्यले पुष्पक विमानरूपी ट्वीनअटर चढ्यो । म सदरमुकामको सिमकोटी हुँ चामलको राशमा बसेको सिमकोटी ? रक्सीको बासमा बसेको सिमकोटी हुँ ? तासको रासमा बसेको सिमकोटी हुँ ? ‘भित्त जान्दैन भाहिर मान्दैन उन्तर ल्हैजा काल’ भन्ने हुम्ली उखान चरीतार्थ भएको छ सिमकोट ।
अहिले त सिमकोटीहरू जग्गा बेच्दै किताबलाई चाकमा लुकाई फेसनदार भएका छन् । गर्भभित्रै पे्रमपत्रहरू आदनप्रदान गरेर सात महिनामा आमाबुवा बनेका छन् । मादक पदार्थ र धुम्रपानको प्रतियोगिता हुन्छ । सिममा भिजेको कोट त अहिले दुगन्र्धमा भिजेको फुटपाथको सस्तो भोट, नोट, बोट र रोटका लागि खर्च भएको छ । स्वार्थको हिटलर हिँड्दैछ, ड्रक्यूला नाँच्दैछ र दादा इमिन गीत गाउँछ । प्रत्येक चोक गल्ली र कोठा चोटाहरूमा छाला तरेर घाम ताप्छन् । यहाँका धाराहरू बौलाएका छन् । रुखहरू रक्सी पिउँछन् । खाद्यान्न मालपानीको सौगात हुन्छ । फगत् दत्तात्रेय चौतारी ठिङ्ग उभिएको छ । जग्गा बेच्यो । भाग्यले पुष्पक विमानरूपी ट्वीनअटर चढ्यो । नेपालगञ्ज ओल्र्यो, बारी चट, जग्गा चट र फोटो खिच्यो एक सट । र त दिनका दिन बजारको मार छ । घाँटीमा सुनको हार छ । म त सिमकोटी हुँ भन्ने घमण्डको हजार भोल्टको तार छ । घर वरपर अंकुशको तार छ । बारीभरी प्लाष्टिकको फोहारको उपहार छ । जग्गाभरी झिनीन्टीको जार छ । सबैको घाँटीमा शिशाको हार छ । र त पनि म सिमकोटी हुँ सिमकोटको ? म सदरमुकामको सिमकोटी हुँ चामलको राशमा बसेको सिमकोटी ? रक्सीको बासमा बसेको सिमकोटी हुँ ? तासको रासमा बसेको सिमकोटी हुँ ?
यहाँ पिढी अन्तर छ । ‘भित्त जान्दैन भाहिर मान्दैन उन्तर ल्हैजा काल’ भन्ने हुम्ली उखान चरीतार्थ भएको छ सिमकोट । नेताका लागि भाला, चेन, छुरी र सिक्री बोक्ने हाम्रा सक्रिय र सशक्त जनशक्तिहरूले आफ्नो सांस्कृतिक र सामाजिक पहिचान खोज्नुको सट्टा घर घरमा ढाड सेकाएर चामलको सामाल खोज्न खाद्य गोदाममा जान्छन् । तर पनि गुलेली हानेर गोतीयारलाई नै घाइते बनाउने काम भएको छ । न त बाजेको अर्ती नातिको नाकमा पुग्छ न त बाजे नातिको पालाको विकासलाई स्वीर्कान सक्छ ? न त छोराले बाबुको पालाको सकारात्मक विधि र नीतिको लेखाजोखा गर्न जानेको छ । न त बाबुले छोराको पालाको परिवर्तनलाई स्वीकारेको छ । सासुहरू बुहारीलाई जुठो भाँडा मात्र धुवाउन सिकाउँछन् तर सिर्जनाको बाटोमा बार लगाई बैकिनीको जातले घरको धेलो नाँघ्न हुन्न भनेर भविष्यवाणी गर्छन् । अझै पनि आशा गरौं । केही सक्षम जमातबाट उन्नत, उज्ज्वल, र उज्यालो भविष्यको आशा लाग्दो क्षणको प्रतीक्षा गरौं !
(लेखक हुम्ली लामो समयदेखि मोफसलमा बसेर पत्रकारिता, समाज अध्ययन र साहित्यमा कलम चलाइरहेका छन् ।)
सिमकोट हुम्लाको केन्द्र